Nzira Shanu dzeMartech Makambani Anotamba Mutambo Murefu Akapihwa Anotarisirwa 28% Kudonha Mukushambadzira Shandisa Martech Zone
Iyo Coronavirus denda yauya neayo seti yematambudziko uye kudzidza kubva munharaunda, yemunhu, uye bhizinesi maonero. Zvave zvichinetsa kuchengetedza bhizimusi nyowani kukura nekuda kwekusagadzikana kwehupfumi uye mikana yechando yekutengesa.
Uye ikozvino iyo Forrester inotarisira kuti inogoneka 28% inodonha mumari yekushambadzira pamusoro pemakore maviri anotevera, mamwe emakambani zviuru zvisere + nemartech anogona kunge ari (zvisina tsarukano) vachizvimhanyisa kuti vanyanye kugadzirira.
Nekudaro, izvo zvandinotenda zvinochengeta mabhizimusi emartech achikura panguva yasara yedenda iri - uye tsika yakanaka yekufambisa kwenguva refu zvakare - ndeye kudzikisira pasi pane masimba aripo, maturusi, uye zvinhu.
Heano mazano mashanu ekuchengetedza zviwanikwa nekuchengetedza simba uchishandisa izvo zvauinazvo kare:
Bvisa kumashure uye kusasana: Chinja zvemukati mako Marie Kondo, uye dzokera kune yako refu-refu-yekuita zvinyorwa. Chekupedzisira tarisa kune izvo zvishoma zvinodzvinyirira zvinhu zvakaiswa kwemwedzi, pamwe makore, asi zvinogona kutyaira kugadzirwa pamusoro pepfupi uye kwenguva refu. Kambani yedu yanga ichitekeshera zvine mutsindo backlog zvinhu mumabasa ekutengesa, mari, kubudirira kwevatengi, uye dzimwe nzvimbo zvichitiita kuti tiwedzere kushanda, uye kunyange kutovhura mikana mitsva yekukura.
Zvichida iwe une zvimwe zvekutanga zvekugadziriswa kwezvivakwa zvawanga uchireva kuita kune yako tekinoroji. Shandisa nguva ino kugadzirisa izvo zvidiki zvakakosha uye kusimudzira bhizinesi rako kana zvigadzirwa zvekuti kana kutengesa kwatanga kutora zvakare.
Deredza zvimwe zve chikwereti chesangano: Sezvakangoita mukusimudzira tekinoroji patinowana chikwereti chehunyanzvi, mumasangano tinogadzira chikwereti chesangano. Tora nguva ino kutsanangura patsva uye kugadzirisa mashandiro ako, kuchenesa, uye kubatanidza yako data kuitira kuti uve neruzivo rwakanakira vatengi vako, zvigadzirwa, uye bhizinesi rese. Kutora nhanho kumashure kana maitiro kana shanduko zviwanikwa zvinokutendera iwe kutora yakachena pepa rekugadzirisa nzira kune yako yepamoyo bhizinesi maitiro. Semuenzaniso, timu yedu nguva pfupi yadarika yakashandisa yedu mutengi data chikuva (CDP) kuronga, kudzokorora, uye kuchenesa data redu rese rekutengesa uye rekushambadzira pamasosi, kuti tikwanise kumhanyisa zvakanangana, zvakanangwa, neIroi iri nani.
Svika pakuziva yako tech: Mushure mekudyara chikamu chakanaka chebhajeti mune chaiyo tech mhinduro yekutengesa kwako, kushambadzira, IT, nezvimwe, zvinokumbirwa uye zvimwe zvipingamupinyi zvinogona kunge zvakatadzisa zvikwata zvako kubva kuzere-kushandisa mapuratifomu aunobhadhara. Kubva kuSlack kune yako CRM system yesarudzo, shandisa ino nguva yekuzorora kuti uve nyanzvi pane akakosha maturusi mune yako toolkit, kana kudzamisa ruzivo pane mashoma-anozivikanwa maturusi. Kunyangwe makambani akaita saMarketo neMicrosoft ari kuona uyu mukana uye kugadzira kudzidziswa kwepamberi kwezvigadzirwa zvavo kuwanikwa mahara.
Tarisa pane vatengi varipo: Kutengesa kunogona kunonoka uye edu akajairwa kumeso-kumeso kutengesa mikana ishoma panguva yedenda (kutaura zvishoma); asi, hazvireve kuti maoko ako akasungwa. Sezvo makambani anoshandisa zvakanyanya izvo zvavanotova nazvo, izvi zvinosanganisira vatengi varipo. Brainstorm nekutengesa, kushambadzira, kubudirira kwevatengi, uye vamwe kuti vawane nzira dzekugadzira dzekukudziridza hukama kana kuwedzera kuvimbika kune vese vatengi vako. Chikwata chedu chakatanga kugadzira nekugovana akateedzana emavhidhiyo ekudzidzisa kubatsira vatengi kuti vagadzikane uye vafarire kushandisa maficha nyowani epuratifomu yedu.
Dzokorora pasi pane hunyanzvi: Iwe wakahaya akanakisa ezvakanakisa uye urikugadzira zvaunoona sezvakanakisa. Asi, zvingave here kuti vashandi vako, kana vakapihwa mukana wekuvandudza, vanogona kusimudzira zvigadzirwa uye maitiro zvakanyanya? Munguva yekuzorora, ita kuti ive yekutanga-yekambani kuisa mari mukuvandudza. Kutanga kambani-yakafara hackathon kana kukwikwidza kune hushamwari kunopa vashandi mukana wekuongorora, kuyedza, uye kuuya nemhinduro nyowani nyowani. Kambani yedu nguva pfupi yadarika yakaita izvi ikaona kuti nema hacks mashoma, chigadzirwa chedu chinogona kutonyanya kubatsira kuchikwata chedu chemukati, uye kune vatengi vedu zvakare.
Hazvina mhosva kuti makore maviri anotevera anotamba sei, ndinotenda denda iri ratirangaridza - vatungamiriri vebhizimusi nevashandi zvakafanana - kuti kana matambudziko akamuka, nemikana yakadaro. Chii chinopa mukana iwo iwo mikana kuti utumbuke ikambani tsika inokurudzira rusununguko, kugona uye kukura. Vashandi vanofanirwa kukurudzirwa kuyedza zvinhu zvitsva vozopembererwa nekuda kwehunyanzvi uye mhinduro.
Hazvina mhosva kuti kambani yako yemartech inosarudza sei kuita zvakanyanyisa pane izvo zvainazvo kare - ngazvive izvo zvinotarisisa zvigadzirwa zvako, maturusi, vanhu kana vatengi - chinangwa chekupedzisira ndechekusimudzira kuda, kunyangwe munguva dzakaoma.
Tags: cdprakachena pepa redesignmakwikwiCRMbudirirohackathonkwezvivakoutsanzikushambadzira kumashurekushambadzira shandisamarketomartechmartech vatengesiMicrosoftchikwereti chesanganoTechnology